iPhone 5C miaraka amin'ny Touch ID sy iPhone 6S amin'ny volana Aogositra | Vaovao IPhone
Farafaharatsiny izany no mipoitra avy amin'ny sary izay mitondra mankany amin'ity vaovao ity. Taorian'ny fihetsiketsehana mahery vaika tato ho ato tao amin'ny Apple dia nahamarika antsipirihany tsy mazava nefa mety hanambara (tsy vao sambany hitranga izany), ary izany dia ilay sary fampiroboroboana ny dockte vaovao izay natolotr'i Apple dia mampiseho izay hataony ho iPhone 5C misy TouchID, na angamba iPhone 5S misy casing plastika. Na inona na inona vokany dia vita ny fifanolanana.
Ankoatr'izay, iray amin'ireo mpandinika malaza indrindra, Andriamatoa Ming-Chi Kuo dia naminavina fa mety hanolotra ny iPhone 6S i Apple amin'ny volana Aogositra, iray volana alohan'izay mahazatra. Na izany aza, ho tonga ao amin'ny magazinay amin'ny daty fandefasana mahazatra.
1 iPhone 5C miaraka amin'ny Touch ID
2 iPhone 6S amin'ny volana aogositra
iPhone 5C miaraka amin'ny Touch ID
Azontsika jerena ity sary ity amin'ny sary farany an'ny sary fakana sary mba hampiroboroboana ny dock ao amin'ny tranonkala ofisialin'i Apple, na eo aza ny resabe dia mitohy izy ireo, ao ITY rohy. Ny zavatra voalohany manaitra antsika amin'ny sary dia tsy isalasalana fa tsy ny santionany iPhone dia ny maodely 5C, fa ity maodely ity dia tsy misy Touch ID fa ilay ao amin'ny sary kosa. Ary tsy resaka famirapiratana na fampisehoana ny sary izany, satria raha manitatra azy isika dia afaka mahita ny làlana latsaka izay ananan'ny Touch ID, ka tsy misy fisalasalana.
Tsy dia lavitra loatra ilay hevitra raha heverintsika fa fotoana tokony hanavaozana ireo fitaovana ary ny Touch ID dia fitaovana iray ampidirin'i Apple tsikelikely amin'ireo fitaovana rehetra azony atao. Tsy misy isalasalana, ny dingana lojika indrindra dia ny fisotroan-dronono ny iPhone 5S, mba hanomezana lalana ny iPhone 5C miaraka amin'ny fitaovan'ny iPhone 5S, toy ny efa nataony tamin'ny iPhone 5 tamin'ny androny. Raha ny marina dia miloka aminy aho, ary isika izay nanolo-tena ho an'ity ao amin'ny tontolon'ny Apple nandritra ny fotoana elaela dia mahalala fa matetika ny sary na "fanaraha-maso" sasany dia milaza zavatra betsaka kokoa noho ny noeritreretintsika ho tetika marketing tsy azo fantarina.
Mazava ho azy fa mandondona ny tsaho momba ny iPhone 6C mety ho izy, satria ny fisehon'ny fitaovan'ny fitaovana sy ny bokotra dia manondro mazava tsara ny kinova miorina amin'ny iPhone 5. Inona no mety ho lesoka amin'ny firafitry ny sary?Eny, koa, fa aleo aloha matotra, tena tsy azo inoana izany, ary vao mainka aza rehefa dinihina fa efa niresaka momba ny olana tao amin'ny Internet nandritra ny ora maro isika ary Apple aza tsy maika ny hanala azy.
UPDATE: Vao avy nanova ny sary tamin'ny 19:00 hariva i Apple tamin'ny fampidirana bokotra fanao mahazatra an'io iPhone 5C io, na izany aza, ny sary lohateny dia fakana mivantana an'io sary io, ary mahita ny famirapiratan-kery sy tsy voajanahary atolotry ny Home of the new iray sary toa nisy zavatra tafavoaka ny Cupertino.
iPhone 6S amin'ny volana aogositra
Ankehitriny dia anjaran'ny iPhone 6S, izay efa honohono dia mety ahitana fiovana maro be izay tokony ho noheverina fa nantsoin'i Apple hoe ny iPhone 7 noho ny revolisiona izay heverina fa ilaina (mamela ahy hisalasala). Ilay mpandalina KGI, Ming-Chi Kuo, izay matetika no marina ny faminaniany, dia manamafy fa hanambara ny iPhone 6S i Apple amin'ity indray mitoraka ity, somary aloha kokoa noho ny mahazatra antsika, amin'ity volana aogositra ity na dia tsy hahatratra ny Apple aza ilay fitaovana. Tehirizo hatramin'ny septambra toy ny taloha.
Ity fiovana amin'ny famelabelarana ity dia mety noho ny fikasan'i Apple amin'ity indray mitoraka ity, ny fananana ny iPhone 6S hatramin'ny nanombohany tany amin'ny firenena rehetra amarotany iPhones. Mazava ho azy, any Apple dia manana ny lokon'ny orinasa mena izy ireo raha raisinay ny Apple TV vaovao antenaina ihany koa izay haseho afaka tapa-bolana ao amin'ny WWDC 15, miaraka amin'ny fanatsarana miavaka amin'ny fitaovana, Siri sy ny fivarotana fampiharana azy manokana. Na izany aza, tadidinay fa tsy mbola nanolotra iPhone i Apple tamin'ny volana aogositra ary mbola tsy misy fiovana fantatra amin'ny ora fiasana sy ny fotoam-pialan-tsasatr'ireo mpiasan'ny Apple, noho izany ity tsaho ity dia tsy mahazo hery tahaka ny iPhone 5C miaraka amin'ny Touch ID an'ny izay farafaharatsiny mba ananantsika sary.
Na izany aza, ampahatsiahivinay anao fa amin'ny iPad News dia hampahafantatra anao ny momba ny WDCC 15 izahay, ary amin'izay iza no tsara noho izahay. Mifalia, araho aminay ao amin'ny twitter izahay ary aza hadino ny antsipirian'ny fampahalalana tsirairay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPhone 5C miaraka amin'ny Touch ID sy iPhone 6S amin'ny volana Aogositra
hadisoana tamin'ny famolavolana ny sary, aza mandefa resaka tsy misy dikanteny mba havoaka, mieritreritra kely, manao fikarohana kely. Manodinkodina azy ireo amin'ny banga marobe izy ireo ka samy mamoaka eto sy iPhone izao.
Olloclip dia manolotra Active Lens ho an'ny iPhone 6, zoro malalaka ary telefaona iray ao anaty iray